Missoula Volunteers Raise Funds for Naga School By Clem Work
In the midst of one of Myanmar’s worst crises in modern times, the best thing to do is to nourish hope forabrighter future, and what better way than to foster education? With that in mind, Missoula’s Global Faith Group, whose members had trained English teachers with Studer Trust in 2015 and 2018, launched Room2Learn on April 17. The objective of the global fundraiser was to help buildaschool in the Naga Self-Administered Zone (SAZ). After three weeks, the fund had collected $20,736, about half of what is needed to complete the school in the village of Khar Lel.
Most of the materials for the four-classroom brick-and-steel schoolhouse will be coming from Yangon and Mandalay by boat and truck,a700-mile journey that will probably take at leastamonth from the central Myanmar city. Workers, too, will need to be transported to the remote site. Groundbreaking will not take place until funding has been secured, but Studer Trust chairlady Cho Cho Lwin said she hopes that will occur by the end of the year. Studer Trust focuses on supporting communities in some of the most underdeveloped areas in the country: Chin State and Nagaland in the northwest, Shan State to the east, and Tanintharyi Region to the south.
Education will reduce poverty and inequity, increase household incomes, improve individual and family health, strengthen the communities and expand economic development. It will also promote lasting peace by helping to build national unity in an area that hasalong history of fighting and civil strife. Finally, education will really help people stand up for themselves. This is particularly true in Naga, where thousands of children lack access toaquality education because there isasevere lack of schools and the mountainous terrain makes it difficut to travel to school. According to the 2014 Census, 71% of adults 25 years and over in the region had never been to school, and only 5% of adults have completed high school.
Leaders of the fundraising drive initially setagoal of $10,000 to build one classroom, but within 72 hours had doubled the goal to $20,000 because of the strong response to the appeal on the fundraising site Chuffed. The Australian company was chosen because it has an excellent reputation, charges no platform fees and pays out directly to Studer Trust’s U.S. dollar account in Hong Kong. As of May 7, more than 125 supporters had contributed amounts ranging from $25 to $1,000. Even after the goal was achieved, the fund was kept open until May 28 in hopes of securing more funds to be used toward completion of the school.
With deep appreciation for the mission and integrity of Studer Trust and the dedication and hard work of its small staff, the Global Faith Group has raised USD 45,000 since 2012 to support Studer Trust teachers and schools through scholarships and building projects including lavatories,adental clinic andapower sub-station.
Missoula Volunteers များ နာဂစာသင်ကျောင်းအတွက် ရန်ပုံငွေရှာဖွေခဲ့ခြင်း
ရေးသားသူ Clem Work
မြန်မာနိုင်ငံ၏အဆိုးဆုံးသောယနေ့ခေတ်ကပ်ကာလအတွင်းတွင် အကောင်းမွန်ဆုံး ပြုလုပ်နိုင်သည်မှ ပိုမိုတောက်ပသည့် အနာဂတ်များ အတွက် မျှော်လင့်ချက်ပြည့်ဝစွာထားရှိပြီး ထိုအနာဂတ်ကိုရောက်ရှိရန်အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ ပညာရေးကိုအားပေးမြှင့်တင်ရန်ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအတွက်ကြောင့် ၂၀၁၅ နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်များတွင် Studer Trust ၏ အင်္ဂလိပ်ဆရာများအား သင်တန်းပို့ချခဲ့ဖူးသည့် Missoula’s Global Faith Group မှ Room2Learn အစီအစဥ်အား ဧပရယ်လ (၁၇)ရက်တွင် အစပျိုးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၎င်းအစီအစဥ်၏ ရည်မှန်းချက်မှာ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဒေသတွင်း စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ပေးရန်အတွက် ရန်ပုံငွေကို ကမ္ဘာတ၀ှမ်းတွင်အလှူခံရန် ဖြစ်ပါသည်။ ရက်သတ္တပတ် (၃)ပတ်ကြာပြီးနောက်တွင် ရန်ပုံငွေ ကန်ဒေါ်လာ၂၀,၇၃၆ဒေါ်လာ အလှူခံရရှိခဲ့ပြီး
၎င်းပမာဏမှာ ခါလဲကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့်ငွေ၏တစ်၀က်ဖြစ်ပါသည်။
အုတ်၊စတီးတို့ဖြင့် တည်ဆောက်မည့် စာသင်ခန်း(၄)ခန်းပါ ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ရန်အတွက် လိုအပ်သောဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများကို ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့ကြီးတို့မှ ကားတစ်တန် လှေတစ်တန်ဖြင့် ၎င်းခါလဲကျေးရွာအထိ မိုင်၇၀၀ ခရီးကို သယ်ယူရန်မှာ တစ်လခန့်ကြာမြင့်နိုင်ပါမည်။ အလုပ်သမားများလည်း ထိုကဲ့သို့ပင် လာရောက်ကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ကျောင်းလုံးရန်ပုံငွေ အလှူခံရရှိပြီးမှသာ ကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ရန် ပန္နက်ရိုက်သည့်လုပ်ငန်းကို စတင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး Studer Trust ၏ ဥက္ကဌ ဒေါ်ချိုချိုလွင်မှ ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် စတင်လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဟု သူမမျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Studer Trust အနေဖြင့် မြန်မာပြည် အနောက်မြောက်ဘက် ချင်းပြည်နယ်နှင့် နာဂဒေသ၊ အရှေ့ဘက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်နှင့်၊ တောင်ဘက်တွင် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး စသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနောက်ကျသည့်နေရာဒေသများရှိ ပြည်သူလူထုနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကို အထူးအလေးထားအာရုံစိုက်ပြီး ထောက်ပံ့မှုများကိုပေးအပ်လျှက်ရှိပါသည်။
ပညာရေးသည်ဆင်းရဲခေါင်းပါးမှုနှင့်တရားမျှတခြင်းမရှိမှုကိုလျှော့ချပေးလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်စုဝင်ငွေတိုးပွားလာစေ၍ မိသားစုနှင့်တစ်ဦးချင်း၏ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေနိုင်ပြီး လူထုအဖွဲ့အစည်းကိုအင်အားတောင့်တင်းခိုင်မာလာစေနိုင်ကာ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကိုလည်း ကျယ်ပြောလာစေနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ပြည်တွင်းပဋိပက္ခနှင့်သမိုင်းအစဉ်အဆက်တိုက်ခိုက်နေမှုများဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေသည့်နေရာဒေသများအတွင်းနိုင်ငံအဆင့်စည်းလုံးမှုရှိလာရန်အကောင်အထည်ဖော်မည့် ရေရှည် ငြိမ်းချမ်းရေးအားတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းစေနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အဆုံးတွင်မူ ပညာရေးသည်လူထုအနေနှင့် မိမိအတွက်မိမိရပ်တည်နိုင်လာစေမည်ဖြစ်ပါသည်။ နာဂ‌ဒေသသည်မြေအနေအထားအရ တောင်တန်းပေါ်တွင် တည်ရှိမှုကြောင့် ကျောင်းတက်ရောက်ရန် အခက်အခဲဖြစ်စေပြီး စာသင်ကျောင်းအရေအတွက် မပြည့်စုံမှုကြောင့် အရည်အသွေးမှီပညာရေးကို သင်ကြားခွင့်မရရှိသည့်ကလေးငယ်အရေအတွက်ထောင်ချီရှိသည်မှာ အခြေခံကျသည့်အချက်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၄ခုနှစ် Census စစ်တမ်းကောက်ယူမှုများအရ ၎င်းဒေသရှိ အသက်(၂၅)နှစ်နှင့် အထက် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ (၇၁)% သည် ကျောင်းမနေဖူးသူများဖြစ်ကြောင်းနှင့် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ (၅)%သာ အထက်တန်းကျောင်းပြီးမြောက်ကြောင်း သိရပါသည်။
ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်များသည် မူလက စာသင်ခန်းတစ်ခန်းတည်ဆောက်ရန် ကန်ဒေါ်လာ ၁သောင်း ရရှိရန်သာ ရည်မှန်းထားသော်လည်း ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေး website Chuffed ပေါ်တွင် တုံ့ပြန်မှု အင်အားကောင်းမှုကြောင့်(၇၂)နာရီအတွင်း ရန်ပုံငွေကို ရည်မှန်းထားသည့်ပမာဏ၏နှစ်ဆကန်ဒေါ်လာ၂သောင်းတိုးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဩစတြေးလျအခြေစိုက် ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေး websiteမှာ ဂုဏ်ပုဒ် ကျော်ကြားခြင်း၊ ၀န်ဆောင်မှုအခကြေးငွေ မတောင်းခံခြင်း၊ ဟောင်ကောင်နိုင်ငံရှိ Studer Trust ၏အမေရိကန်ဒေါ်လာအကောင့်ထဲသို့ တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲနိုင်ခြင်း စသည့်အချက်အလက်များကြောင့် အသုံးပြုရန် ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မေလ(၇)ရက်နေ့အရောက်တွင်(၁၂၅)ယောက်ထက်ပိုသည့် ထောက်ပံ့လှူဒါန်းသူများက ၂၅ ဒေါ်လာမှ စပြီး ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ အထိ ပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့ပြီး
ရည်မှန်းထားသည့်ပမာဏရရှိခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း ကျောင်းတည်ဆောက်မှုပြီးမြောက်သည်အထိ အသုံးပြုမည့်ရန်ပုံငွေအလုံအလောက်ရရှိစေရန်မေလ(၂၈)ရက်နေ့အထိတိုင် ရန်ပုံငွေကောက်ခံမှုကို ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
Studer Trust ကျောင်းများမှဆရာများအားထောက်ပံ့ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊စာသင်ကျောင်းများတွင်ပညာသင်ဆုပေးအပ်နိုင်ရန်နှင့် လျှပ်စစ်မီးပြည့်၀စွာရရှိနိုင်ရန်လည်းကောင်း၊သွားဆေးခန်း၊စာသင်ခန်းနှင့် အိမ်သာသန့်စင်ခန်းများတည်ဆောက်ပေးခြင်း အစရှိသည့်ပရောဂျက်များအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်၂၀၁၂ခုနှစ်မှစတင်၍ကန်ဒေါ်လာ၄သောင်းငါးထောင် ကို Global Faith Group မတည်ကောက်ခံ ကူညီပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ကူညီပေးနိုင်ရန် Studer Trust၏ ရည်မှန်းချက်များနှင့်ခံယူထားသည့်တာဝန်များ၊ တည်ကြည်ဖြောင့်မတ်မှုနှင့်တကွ ဝန်ထမ်းများ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို Global Faith Groupမှ Studer Trust အဖွဲ့နှင့် အဖွဲ့သားများအားလုံးကို နှလုံးသားထဲမှ လှိုက်လှဲစွာ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိလိုပါသည်။